Press Release - ​FRONT FOR INDEPENDENCE OF OROMIA (FIO)
FRONT FOR INDEPENDENT OROMIA (FIO)
KALLACHA WOLABUMMAA OROMIAA OROMIA INDEPENDENCE FRONT
LAAK: kwo-075-2015 REF.NO : oif-075-2015
GUYAAA : Sada. 27 , 2015 DATE : Nov. 27, 2015
“Waayeen Lafa Oromoo qixa Lafee Oromooti lakkaawama“
Ibsa Master Pilanii Finfinnee Ilaalchisee Dhaaba Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) irraa kenname.
Karoorri Motummaan Wayyanee Dhaloota isaa irraa kaasee Ummata Oromoo fi Cunqurfamoota Sabaa fi Sabllamoota Etoophia keeyyssa jiran hunda lafa isaanii irraa buqqisee hiyyoomsuudhan qabeenya isaanii saamee humna isaa yeroo irraa gara yerootti cimsachuun bara bittaa isaa dheerafachuudha.
Karrorri wayyyaneen maqaa “Master Pilaanii Finffinnee jedhuun” ummata keenyarratti fe’uuf deemtu kun itti fuufnsa karoora mootummoota habashaa dhufaa dabrraa (Minilik –Wayyaanee) kan Ummata keenya lafarraa fixanii lafa isaa humnnaan dhuunfachuuti. Walumaa gala dhimmi kun saba Oromootif dhimma baduu fi jiraachuti. Waan kana tayeef, dhaabni keenya KWOn Sabnni Oromoo yeroo ammaa carraa lama qofa qaba jedhee amana. Baduu yookaan jiraachuu. Karaan walakkaa kana deemsisu gonkuma hin jiraatu.
Haaluma Kanaan mootummaan abbaa irree wayyaanee maqaa Master Pilaanii Finffinnee jedhuun Uummata Oromoo nannawa Finffinnee qubatu (Magaalaa Ambboo irraa Haga magaalaa Adaamatti) lafa Hectaara Milliyoona tokko ol ta’u irra qubatu lafa isaa irraa humnnaan buqqisee, aadaa, afaanii fi seenaa Saba Oromoo balleesee ummata biroo kan aadaa, seenaa fi afaan biroo qabu walakeessa Oromiyaati uumun Oromiyaa Bahaa fi dhihatti adda qoqoodee bituuf karoorfatee irratti hojjachaa jira.
Akka seerri mootummaa wayyanee lakkoofsa 49 tuqaa 5 jedhuttui magaalaan Finffinnee magaalaa mootummaa Federaalaa taatee naannoon Oromiyaa bu’aa addaa akka irraa argatuu fi dhimma bulchiinsa waloo magaalaa Finffinnee dubbata. Bu’aan kunis seeraan akka murtaayu hima. Mootummaan abbaa irree kan seera ufii isaa barreese tokkollee kabajuuf danddeetti/fedha hin qabne kun bu’aa Oromiyaan magaalaa Finffinnee irraa qabdu kabajuun hafnnaan magaalaalee Oromiyaa Godina addaa jala jiran hunda dhuunfatee saba Oromorratti sanyyii duguuggaa daangaa hin qabne raawwachuuf karoorfatee haara galtii tokkoon malee hojjataa jira. Sabni Oromoo shira kana cal jedhee fudhachaa hin jiru. Waggaa dabrre barattonni Oromoo balaa saba Oromoo irratti aggaamate kana karaa nagahaan dura dhaabachuuf qalamaa fi waraqaa adii qabatanii hiriira bahan gara nyaattii tokkoon malee rasaasa wayyanetiin tumamanii ajjeefaman. Kuun mana hidhaa wayyanetti guuraman. Kan hafan mana barumssaa irraa ar’iaman. Wayyaneen Saba Oromoo daangaa malee tuffachuudhaan biyya keenyarratti ilmaan keenya nu jalatti fixaa jirti. KWOn gootota haqaa isaanii osoo falmatan wareegaman kanaaf kabaja ol’aana qaba. Seenaa isaanitis bara baraan yaadata. Isaan kun gootota dhugaati.
Dhaabni keenya KWOn Karooorri wayyaaneen fedha Uummata Oromootin ala magaalaa Finffinnee dhibantaa 80 oliin (80%) guddisuf karoorfatte aadaa, seenaa fi afaan Oromoo balleesuun seenaa, aadaa fi afaani birotin bakka buusuu waan tayeef qixa sanyii duguuggaa (genocide) uummata keenyaratti raawwachuuti jedhee amana. Kanaaf, KWOn sanyii duguuggaa bifa kanaan Saba Oromoo irratti aggaamate kana murannoodhaan dura dhaabbata, shira daangaa hin qabne kana fashaleesufis garaa kutannoon irratti qabsaaya. Wareegama barbaachisu kafaluuufi qophiidha.
Kanaaf, KWOn Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaan, akkasumas dhaabbotiin siyaasaa Oromoo hundi garaa garummaa yaadaa, siyaasaa, amantii qubsuma lafaatin osoo hin daangefamne tokkumaadhaan akka dura dhaabbatu waamicha lammummaa dabarsa.Dabalataan humnnoota waaraanaa fi poolisaa kanneen lammii Oromoo ta’an cufti tajaajila moottummaa Oromoo dhabamsiisuuf bu’ureeffate kanaaf laataa jiran seenaan boru akka gaafatu hubatuudhaan qabsoo ummata wajjiin akka dhaabbatan waamicha goonaaf.
Dhumarratti KWOn rakkoon Saba Oromoo kan furmaata waaraa argatu gaafa Oromoon ijaaramee humna murteessaa tayee sirna kiyyoo gabrummaa buqqisee uf irraa darbee ummata bilisa biyya walabaa fi mootummaa mataa isaa birmada Uumatee biyya isaa Ormiyaa fi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee harkatti galfate qofa waan tayeef ummanni keenya dhaaba isaa KWO waliin hiriiree gootummaan diinarratti akka qabsaayuu waamicha dabasina.
Oromiyaan Ni Walaboomti !
Ummannni Oromoo gabrrummaa jalatti erga kufee kaasee gaaf tokkollee tole jedhee gabroomfattoota Habashaa jalatti bulee hinbeeku. Ummanni keenna erga gabroomffattoonni balbala isaa gahanii kaasee humnna qabu hundaan lola ufirraa ittisuu (War of resistance) dabalatee gootummaadhaan diinota isaa falmaa ture.
Qabsoo Ummata Oromoo haalli seenaa tokko tokko jidduu seenanii yoo bifa biraa qabsiisanillee (lola xaaliyaanii, sochii Mangistuu Nuway, warraaqsa bara 1974 fi dhufaatii wayyaanee kan bara 1991) qabsoon teenna waggoota dheeraa kanniin keessatti kufaa ka’aa yoona geettee jirti.
Qabsoon Saba keennaa tun, akka ammayaatti kan eegalamte bara 1973 hundeefama Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) tiin akka ta’e namiifuu ifa galaadha.
Qabsoon bara dheeraaf hoggansa dhaaba siyaasaa dhabdee kufaa, ka’aa achi geette yeroo jalqabaatif ilmaan Oromoo gootummaadhaan ka’anii dhimma Saba ufiitiif akkasumas dhimma biyya ufiitif (Oromiyaaf) falmmudhaaf sagantaa siyaasaa qopheeffatanii waanjoo gabrrummaa
kuffisuudhaf sochiin taasisan, sochii seenaa qabeesssa jennee amanna.
Uummanni Oromoo haqa isaa barbaadachuudhaaf dhaaba ufiitin hogganamee deemudhaaf fedhiin inni qabu hedduu kan nama dinqisiisu fi ar’allee kan mul’atuudha. Haa ta’u malee, qabsoon bilisummaa tan ABO dhaan hogganamtu baroota 1973 hanga 1991 keessatti bu’aa adda addaa kan kallattii ta’ee fi kan kallattii hinta’in (tangible & intangible results) haa buusu malee sochiin kun bu’aa lubbuu qabu galmeesisuu osoo hindandayin wayyaneen mootummaa jiddu galeessaa tooyachuudhaan sirna gabroomfataa dulloome abaaraa sirna gabrroomfataa isa caalu bakka buusudhaan ummatarratti feete.
ABO fi dhabbotiin Oromoo adda ddaa jalqabarratti motummaa cehumsaa keessatti qooda yoo qabaatanillee waggaa tokko keessatti dhiibamanii akka mootumicha keessaa bahan taasifame.
Qabsoon Oromoo bara 1992 irraa kaasee hanga ammaatti bifa hoggansi dhaabolee biyya keessaa bahee biyyoota alaa (diaspora) kessatti hundooftee kan deemu ta’e. Har’a qabsoon tun waggoota afurtama booda gatantarttee gara kufaatii deemaa jirti.
Yeroo diinni keennaa gama hundaan ukkamsaa isaa cimsee itti deemaa jiru kana keessatti qabson teenna bacancara akkanaa keessa seenun waan dhala Oromoo hunda gaddisiiseedha. Kanaaf, sochii fi qabsoo ABO jijjiiramaa keessatti adeemsifamaa turee fi sochiiwwan qaamoleen adda addaa yeroo dheeraf karaa adda adddaatin taasisaa turan walitti qindeesudhaan Jilli Qabsaayotaa ABO yeroo isaa eeggatee adeemsifame kana iratti rakkoolee qabsoo bilisummaa
Ummata Oromoo qunnaman kana dhabamsiisudhaaf dirqama jiijiiramni hundee akka taasifamu waliif galamee jira.
Haaluma kanaan nuti qabsaayonni falmii bilisummaa Saba Oromooti fi Walabummaa Oromoyaatif dhaabanne baati Adolessaa 2015 guyyaa 20 iraa kaasee biyyota adunyaa adda addaa keesatti teessuma/kora adeemsifachuudhaan akkasumas kora isa guyyaa dhumaa Magaalaa Minneapolis, MN (USA) keessati Adoolessa 30 fi 31 bara 2015 adeemsifannen yaa’iwwan keenna hunddayyuu milkiidhaan xumuranneerra.
Guduunfaa koroota keennas ilaalchisee waan irra geenne ibsa ijjannoo kanati aanu baafanneerrra:
1. Haala fi sadarkaan qabsoon Walbummaa Oromiyaa irra geette xiinxallaa gadi fagoo fudhachuudhaan, qabsoo tana bacancaraa fi gatantara keessaa baasudhaaf dhaaba haarawa qabsoo tana hafuuraa fi yaada akkasumas sochii haarawaan finiinsu uumun waan barbaachisaa ta’ee argameef dhaaba Kllacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) jedhamu hundeesineerra.
2. Xiyyefannaan kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) gabrrummaa bara dheeraaf Uummata Oromoo irra ture araarama tokkoon malee irratti qabsaayudhaan Saba keenna bilisummaa isaa, biyya teenna Oromiyya Walabummaa isii mirkaneesudha.
3. Haala kanaan sirnni gabrromfataan Uummata keennaa fi Sabootaa fi Sabllammota adda addaa waada kijibaati fi heera gowwomsaa gatii waraqaa seerichi iratti barreefamee hin geenne qabuun Uummattota ukkaamsuu dhisee, mirgoonni diimokraasii, mirgoonni ilmma namaa, mirgoonni haqaa akksumas mirgi hiree murteefannaa Saboota hundaa haal duree tokko malee akka kabajaman jabeesinee waamicha dabarsina.
4. Biyya Impaayera Itoopia keessatti falamitonni dimokrasi, mirga Sabootaa fi mirga ilma namaa manneen hidhaa jiddu galaa, maanneen hidhaa poolisi biyya guutuu keessati, manneen hidhaa naannolee, kaampiwwan waraanaa, kaampiwwani fi jiddu galeesota leenjii polisootaa fi waraanaa keessatti namoonni kuma dhibbaatamatti lakkaawaman murtii malee fi murtii dharaatin hidhamanii tumaman, torcharii seerri addunyaa dhoorgen haala suukkanneessaa ta’een balaan kana hinjedhamnne irratti raawwatamaa jira.
Kanaafuu, hidhamttonni kun haal duree tokkoon malee akka gadi lakkifaman waamicha goona.
5. KWOn shorarkeesummaa bifa kamiinu dhufu hadheefatee balaalleffata. Waanjoo gabrrummaa uummata keenna irraa fonqolchuudhaf qbsoo siyaasaa fi hidhannoo ni fininsa.
6. “Seerri shorarkeesummaa” Motummaan wayyanee baafatee biyya ittiin unkuraa jiru, nagaya uummataa eeguf osoo hin taane taa’ita isaa eegsisuuf kan tolfameedha. Seerri sun seera labsii yeeroo hatattamaati (Marshall law) malee seera namoota dhunfaa, garee adda addaa fi Sabootaa fi Sabllammoota eeguf, bu’aa fi mirgoota isaanii eeguf bayee miti. Kanaaf, seerri ukkaamsaan kun haal duree tokko malee hatattamaan akka diigamu waamicha dabarsina.
7 Heerri Motummaa wayyaanee gatii waraqaa iratti barrefamee hin gayu. Heerri kun mataa isii wayaaneedhaan yeroo dhibba irra dedebi’amee capheera. Heera hujiirra ooluu hindandeenne kan sobaa ta'eera. Kanaaf, heerri kun diiggamee uummattonni karaa bilisa ta’ee fi addunyaan marti arguun dhiibbaa tokkoon malee hiree isaanii ufin akka murteefatan akka taasifamu waamicha goona.
8. Ummanni Oromoo, ilmaani fi dhalli Oromoo hundi bakka jirtanitti tokkummadhaan mirga keesannif dhabaadhaa, abdii kutannaa keessaa bahaa, mirga uumamaa keessaniif qabsotti seennaa jenna.
9. Biyyi Oromiyaa kan Oromoti. Tuffatamaa fi ukkaamsaa biyya teennarratti fe’ame kana cacabsinee biyya teennarratti dimokraasii dhugaa, haqaa fi dhugaan uumamaa akka lalisan Sabni keenna bakka jirutti olola diinaatiin osoo hin gowwomne walabummaa biyya isaatif murannoon akka qabsaayu waamicha lammummaa dabarsina.
10. Kan Oromoo ta’e, kan Oromummaa fi Oromiyaa jaalatu fi qabsaayonni Oromoo hundi sababa adda addaa tarreesuu dhiisanii, ufii walitti garagaluun wal diiguu dhiisanii, gabrrummaa fi gabrroomfattotarratti akka xiyyeefatan
11. Sabootaa fi Sabllammonni mirgi isaanii ukkaamsame hundi shira wayyaaneen xaxxuun osoo hin jilbiifanne akka mirgoota keessaniif bakka jiratn hundatti qabsoofttan waamicha goona.
12. Humnoonni dimokraasii dhugaatif dhaabbattan, humnoonni mirga hiree murteefannaa sabootaatif dhaabatan, humnoonni wal qixummaa fi bilisummaa amantiitif dhaabatan, warri sirni haqaa kan dhugaa tayee fi bilisa taye akka jiraatu amantan hundi, sodaa dhiisudhaan bakka jirtanitti akka qabsooftan waamicha dabarsina.
13. Sirni gabromsaan wayaanee, saamicha daangaa hinqbnneen ummata keenna hiyyoomsuu bira dabree, lafa isaarraa buqqisee alagaa irra qubsiisudhaan Oromiyaa qubsumaan addaan diigudhaaf summii inni facaasaa jiru cimsinee balaalefanna.